Shiinaha Qalabka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida - Soosaarayaasha - Dongguan Qiaofeng Qalabka Qalabka Caaga Co., Ltd
Qaybaha qalabka guryaha caaga ah
Ku xirnaanta alaabta guriga iyo qalabka dhejinta
Isku xiraha Alaabta guriga
Qalabka Difaaca Qalabka
Ku marooji Balaastiigga balaastiigga ah
Barroosinka balanbaalis balastar caag ah
Fiilo darbi wareega
Ilaaliyaha geeska sanduuqa caaga
Lugaha Alaabta Balaastikada ah
Cagaha iswaafajin kara
Qalabka nalalka caaga ah
Siraaj ilaaliyaha godka godka
Xiritaanka Darawalnimada Caaga ah
Xarkaha alaabta guriga ee caarada ah
Xadhig xadhig ah
Qalabka kale ee Caaga ah
Hoyga >Alaabta >Qalabka nalalka caaga ah>Xiritaanka Darawalnimada Caaga ah
Furniture Anti tip Bir Bir Kit
Balanbaalis tolmiyo barroosinka gidaarka naylka balaastiga caag
L wuxuu qaabeeyaa ilaaliyeyaasha geesaha caagga ah
Iskuxiraha Qalabka Bulkhead Corner Iskuxiraha
85mm ilaaliyaha geeska sanduuqa caaga ah ee waara
60W Xakamaynta sanduuqa balaastigga ah ayaa horseed u ah xiritaanka darawalnimada
1. Ma leedahay warshad kuu gaar ah Haa, waxaan soo saare ku nahay Shiinaha in ka badan 10 sano. Warshaddeenu waxay ku taal Gobolka Guangdong. 2. Sideen ku booqan karaa wershadaada? Fadlan si naxariis leh noo sii ogeysii haddaad qorsheyneyso inaad booqato. Waxaan ku tusi karnaa jidka ama waxaan kugu soo qaadan karnaa saldhigga ama garoonka diyaaradaha. 3. Miyaad bixisaa muunado bilaash ah Taasi dhib malahan, waxaan u diri karnaa muunadda bilaashka ah si tixraac loogu sameeyo.
6 ama 18W cabitaanka balaastigga ah ee kaxeynta xakamaynta isgoyska
8W ama 12W wareega hogaaminta sanduuqa iskuxirka balaastigga
18W ama 24W wareega hogaaminta sanduuqa iskuxirka balaastigga
Su'aal: 1. Ma leedahay warshad kuu gaar ah Haa, waxaan soo saare ka nahay Shiinaha in ka badan 10 sano. Warshaddeenu waxay ku taal Gobolka Guangdong. 2. Sideen ku booqan karaa wershadaada? Fadlan si naxariis leh noo sii ogeysii haddaad qorsheyneyso inaad booqato. Waxaan ku tusi karnaa jidka ama waxaan kugu soo qaadan karnaa saldhigga ama garoonka diyaaradaha. 3. Miyaad bixisaa muunado bilaash ah Taasi dhib malahan, waxaan u diri karnaa muunadda bilaashka ah si tixraac loogu sameeyo.
24W abs caag kaxeynta wadista xakamaynta isgoyska
1. Ma leedahay warshad kuu gaar ah Haa, waxaan soo saare ku nahay Shiinaha in ka badan 10 sano. Warshaddeenu waxay ku taal Gobolka Guangdong. 2. Sideen ku booqan karaa wershadaada? Fadlan si naxariis leh noo sii ogeysii haddaad qorsheyneyso inaad booqato. Waxaan ku tusi karnaa wadada ama kugu soo qaadan karnaa saldhigga ama garoonka diyaaradaha.
36W abs caag kaxeynta xakamaynta isgoyska isku xirka
 No.169, Xianjiang Road, Dalang Town, Dongguan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha
@Copyright 2020-2021 Dongguan Qiaofeng Qalabka Qalabka Caaga ah Co., Ltd.